Miaraha miasa amin'ny Adobe Color amin'ny fomba matihanina | Famoronana an-tserasera
Miasa ny loko miaraka amin'ny Loko Adobe, fitaovana matanjaka rehefa miresaka miasa miaraka amin'ny loko nomerika, mamela antsika hahazo sanda ara-tarehimarika marobe amin'ireo maodelim-loko isan-karazany, amin'izay hiasa miaraka amin'ny loko haingana sy tsotra, amin'izay dia hahazo fitaovana mahasoa ho an'ny mpamorona sary, mpanao sary ary na iza na iza liana amin'ny tontolon'ny kanto sary.
Hatsarao ny asanao sary misaotra an'ity fitaovana ity izay hamela anao miasa miaraka amin'ny loko amin'ny fomba voafehy sy matihanina kokoa amin'ny fomba azo ampiharina sy tsotra ary ilaina. Ilaina ny fampiasana loko mba hitrandrahana tsara ny tetikasa sary, ka izany no antony ilana ny fampiasana ireo fitaovana ireo.
Ny Uloko marina tena ilaina amin'ny tetikasa sary mifampiresaka tsara na inona na inona tianao ampitaina amin'ny fiteny psikolojika misy loko, ny loko tsirairay dia maneho zavatra hafa amin'ny firafitra ary ny fampifangaroana azy dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra tianay hampitaina.
Miaraka amin'ny menio iray tena tsotra sy intuitive, mamela antsika ny Adobe Color mifanerasera amin'ny alàlan'ny interface miloko haingana afaka mamorona mpamorona loko isan-karazany. Azontsika atao sary an-tsaina ny loko mifanohitra amin'ny mifanohitra amin'ny loko mitambatra amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana eo amin'ny zoro ankavia ambony amin'ny sary.
Raha mijery ny menio ambany isika dia afaka mahita ny lanja hexadecimal ny loko, ireo soatoavina ireo dia mamela antsika hampiasa azy ireo haingana amin'ny ankamaroan'ny programa momba ny famolavolana sy tranonkala.
Azontsika atao ny manova ny mode modely manomboka amin'ny RGB (loko maivana amin'ny efijery) mankany CMYK (loko ranomainty) raha tsindrio ny ilany ankavia eo amin'ny menio.
Fitaovana tsara an'ity fampiharana an-tserasera ity ny fanamorana vitantsika mahazoa ny lokon'ny sary iray, ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mampakatra sary amin'ilay rindranasa amin'ny alàlan'ny fikitihana ny menio ambony, ao amin'ilay ampahany hitrandrahana lohahevitra.
Araka ny hitantsika, ny fampiharana mampiseho amintsika ny loko amin'ny fomba tsotra afaka mamindra ny kursors aza mba hahazo santionany miloko vaovao. Ity ampahany ity dia tsara ho an'ny a fandalinana loko amin'ny karazana vokatra na karazana famolavolana sary, amin'ny andavan'andro ampiasako azy io hanandramana ireo loko ampiasaina amin'ny fonon'ny karazana karazany.
Fampiharana tena atolotra ho an'ny karazana mpanakanto sary rehetra izay te-hanodikodina ny loko amin'ny fomba tsotra, haingana sy matihanina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Miasa amin'ny loko miaraka amin'ny Adobe Color
Miaraha miasa amin'ny mpitondra ao amin'ny Photoshop